PCB Mount နှင့် AA AA ဓာတ်ခဲ ၄ လုံး
ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ PCB Mount ပါသောဤ4AA Battery Holder သည် 6V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
PCB Mount နှင့်အတူ AA AA ဓာတ်ခဲ ၄ လုံးပါကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် ၁
PCB Mount နှင့်အတူ AA AA ဓာတ်ခဲ ၄ လုံး၏ထုတ်ကုန် ၂. ကန့်သတ်ချက်
ထုတ်ကုန်အမည် PCB Mount နှင့် AA AA ဓာတ်ခဲ ၄ လုံး
PCB Mount နှင့်အတူ AA AA ဓာတ်ခဲ ၄ လုံးကိုင်ဆောင်သူ၏ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်နှင့်အသုံးချမှု
၁။ PCB Mount ပါသောဤ4AA Battery Holder ကို 6v ဘက်ထရီအထွက် (1.5v X4= 6v) ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
PCB Mount နှင့်4AA Battery Holder ၏ ၄ င်း Product Details
PCB Mount အသေးစိတ်နှင့် AA ဓာတ်ခဲ ၄ လုံးကိုင်ဆောင်သူ
PCB Mount နှင့်4AA Battery Holder ၄ လုံး၏ Product Qualification
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့် PCB Mount ပါသောကျွန်ုပ်တို့၏ AA AA Holder ၄ လုံး။
PCB Mount နှင့်အတူ AA AA ဓာတ်ခဲ ၄ လုံးကိုထုပ်ပိုး။ ပို့ဆောင်ခြင်း
PCB Mount နှင့်4AA Battery Holder ၏ ၇. အမေးအဖြေများ